भूकम्पपछि खोटाङका १०६ ओटा सामुदायिक विद्यालय भवन पुनर्निर्माण सम्पन्न
चैत १८, काठमाडौं । महाभूकम्पपछि खोटाङमा १०६ ओटा सामुदायिक विद्यालय भवन पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरिएको छ । विसं २०७२ सालको भूकम्प र पराकम्पपछि क्षति पुगेका १६१ ओटा सामुदायिक विद्यालय भवनमध्ये विभिन्न आर्थिक वर्षमा अपांगमैत्री र महिलामैत्री विद्यालय भवनहरु निर्माण सम्पन्न गरिएको हो ।
भूकम्पपछि अस्थायीरूपमा स्थापना भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ –शिक्षा) शाखाले ९२ ओटा र गैरसरकारी संस्थाले १४ ओटा गरी हालसम्म कुल १०६ ओटा भवन निर्माण सम्पन्न भएको एकाइ प्रमुख बाबुराम पोखरेलले बताए । गैरसरकारी संस्थाले ऐँसेलुखर्क गाउँपालिका र केपिलासगढी गाउँपालिकामा १४ ओटा भवन निर्माण गरेको जानकारी दिइएको छ ।
गैससले अब दुईओटा भवन निर्माण गर्न बाँकी छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको डिजाइन र ड्रइङअनुसार निर्माण भइसकेका भवनहरूमा दुई कोठे ४६ ओटा, तीन कोठे १६ ओटा र चार कोठे ३० ओटा विद्यालय भवन निर्माण भएका छन् । जिल्ला कार्यान्वयन एकाइले ६४ ओटा भवन निर्माण सम्पन्न गर्न बाँकी छ ।
निर्माण सम्पन्न गर्न बाँकी भवनहरुको काम आगामी असार मसान्तभित्र सम्पन्न हुने एकाइ प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिएका छन् । आगामी असारपछि जिल्लाबाट कार्यालय नै उठ्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइएको छ ।
एकाइले चारकोठे भवन निर्माणका लागि रू. ७० लाख ४० हजार, तीनकोठे भवनका लागि रू. ३५ लाख ८० हजार, दुई कोठे भवन निर्माणका लागि रू. २३ लाख ९० हजार बजेट विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध गराएको छ ।
पुनर्निर्माणतर्फ नै एकाइले ३२ ओटा विद्यालयमा अपांगमैत्री र महिलामैत्री शौचालय पनि निर्माण गरेको छ । रू. १५ लाख लागतमा निर्माण भएका सबै विद्यालयका शौचालयमा किशोरीहरुले स्यानिटरी प्याड डिस्पोज गर्न तथा लगाउन/फेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यस्तै १५ ओटा विद्यालयमा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको छ । प्रत्येक विद्यालयमा रू. सात लाख ४० हजार लागतमा खानेपानी योजना सञ्चालन गरिएको जानकारी दिइएको छ । भूकम्प गएको चार वर्ष बित्दा खोटाङमा निजी आवास पुनर्निर्माणको काम ८१ प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ ।
दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा आठ हजार ४६२ र प्रबलीकरणतर्फका ३६१ परिवार गरी कुल आठ हजार ८२३ लाभग्राही रहेका छन् । कुल लाभग्राहीमध्ये हालसम्म ९८ प्रतिशतले पहिलो किस्ता बापत रू. ५० हजार, ८० प्रतिशत लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता बापत रू. एक लाख ५० हजार र ६५ प्रतिशत लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता बापत रू. एक लाख बुझेका छन् । रासस
विकास निर्माणको काममा महिलाको सहभागिता बढ्दै[२०७८ बैशाख, ७]
हावाहुरीका कारण आँप, लिचीमा क्षति[२०७८ बैशाख, ७]